Waylet, Hindisaha adag ee Repsol ee ah in lagu bixiyo iPhone | Wararka IPhone
Waylet, Hindisaha adag ee shirkadda Repsol ee ah in lagu bixiyo iPhone-ka
Carlos Sanchez | | Barnaamijyada IPhone, dhowr
Cepsa waxay ahayd qofkii uguhoreeyay ee si dhab ah u sharaddeeya lacagaha mobilada ee Spain, samaynta dadaal weyn oo xagga saadka ah si inta badan xarumaha gaasku ay ula qabsadaan qaab lacag bixin oo ka duwan kan caadiga ah sida Cepsa Pay. Tani waa iska cadahay looma ogaanin Wixii ku saabsan Repsol, oo, inkasta oo ay qaadatay waqti dheer in laga jawaabo, runtu waxay tahay inay heysato beddel u dhigma.
Dhiirrigelinta ugu weyn ee adeegsiga noocyadan codsiyada waa in la badbaadiyo waqti iyo lacag. Si looga bilaabo qodobada wanaagsan, waa in la yiraahdaa Waylet waxay u hogaansantaa labada dhisme maadaama ay noo ogolaaneyso inaan kaydinno safafka markaan bixinayno, iyo sidoo kale isla nidaamka lagu sameynayo. Laakiin ka sii muhiimsan ayaa laga yaabaa, waxay na siisaa qiimo dhimis si fudud adoo adeegsanaya arjiga, oo hadda lagu xareeyay 3 senti halkii litir, laakiin taasi way kala duwanaan kartaa.
Waylet dabcan wuu bixiyaa, sida kan oo kale tartame ugu weyn, Suurtagalnimada in lagu daro kaarka dhibcaha hay'adda si aan loogu gudbin shaqsi ahaan bixinta. Markaan ka hadlayo bixinta, waa inaan si fudud ku darnaa kaarka amaahda oo si otomaatig ah ayaa loo samayn doonaa iyada oo aan loo baahnayn in jeebkaaga laga soo saaro wakhti kasta, inkasta oo tan la tixgelinayo waa inaan aqoonsanno in Cepsa Pay ay faa'iido yeelan karto iyadoo waliba la shaqeynayo leh PayPal, halka Repsol uusan tan dooran.
In kasta oo codsiyada inta badan leh guulaha ay yihiin kuwa caafimaadka ama ciyaaraha fiidiyowga, at Repsol waxay u maleeyeen in laga yaabo inay tahay ikhtiyaar wanaagsan in lagu dhiirrigeliyo isticmaalka arjiga iyadoo loo marayo nidaam heerar shaqsiyadeed oo lagu kabayo guulaha waxqabadka, wax aan lahayn shaki shaki ku jiro barnaamijka noocan ah. Waxay na siinayaan qodobbo waddo-qabasho ah oo lagu fulinayo hawlo kala duwan sida buuxinta xogta shakhsiga ah ama buuxinta shidaalka iyagoo ku bixinaya barnaamijka, si loo siiyo laba tusaale.
Waxaa jira afar heer (naxaas, qalin, dahab iyo platinum) oo aan ka soo galno dallacaadaha kala duwan. Tusaale ahaan, qalinka waxaan haysanaa qiimo dhimis dheeraad ah ama raafafka wax lagu dhaqo, halka platinum-ka aan ku geli doonno tigidhada dhacdooyinka dhaqanka iyo VIP-da. Waxaa lafilayaa in shirkada Repsol ay sidoo kale soo kordhin doonto dhiiri galin iyo abaalmarino cusub, maadaama arjigu hada uun bilaabay shaqadiisa sida ay sheegtay.
Waa, sidaas darteed, a la tartami kara Cepsa Pay iyo codsi muhiim u ah mobilkaaga si aad lacag ugu keydiso shidaal kasta oo shirkadda shidaalka liinta ah.
Ugu dambeyntiina, waa in la ogaadaa in Repsol ay si ku meel gaar ah u bixiso a kobcinta kaas oo € 3 laga dhimay shidaal kasta oo ka badan € 20, iyada oo ay shardi tahay inuu qof kula taliyo. Haddii aad rabto inaad gasho dhimistaan, waad isticmaali kartaa lambarka 2fi22234 mar aad soo degsato arjiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Waylet, Hindisaha adag ee shirkadda Repsol ee ah in lagu bixiyo iPhone-ka
Bixinta waa in la sameeyaa ka hor inta aan la buuxin deebaajiga (bixinta hore) ama ma buuxin karnaa deebaajiga marka hore oo goor dambe ayaan bixin karnaa?
Waxaan sidaa u leeyahay sababtoo ah barnaamijkii hore ayaa kaliya kuu oggolaaday inaad horay u bixiso, taas oo shaqeyn weyday haddii aad rabto inaad buuxiso haanta illaa inta ugu buuxsan (waa lagama maarmaan marka la isticmaalayo baabuur kiro ah)
Kani waa koodhkayga haddii ay dhacdo in qaar idinka mid ahi soo degsadaan 1OPPFS92. Adiga ayaa kuhelaya discount 3 qiimo dhimis ah Waylet Repsol.
Koodhka qiimo dhimista ee € 3
Ku jawaab Jony
Koodhka dhimista 3 Euros €
app aad u wanaagsan
Mahadsanid kuna raaxee 3
Jawaab Juan Ramón
Koodhka qiimo dhimista ee 3 Euro €
Waad mahadsantahay oo waad kuxirantahay keydinta
Codsi aad u wanaagsan.
Waxaan kaaga tagayaa lambarkayga dhimista ee € 3, labadeenaba waan ka faa'iideysanaa ...
Waxaan kaaga tegayaa lambarka saaxiibkey waxaanan ka faa'iideysaneynaa labada qiimo dhimis ee 3 euro.
€ 3 Dhimis ku saabsan shidaalka markaad gasho Repsol Waylet adoo galaya lambarka: giq42232
Waxaad ku heli kartaa qiimo dhimis € 3 Waylet Repsol adoo galaya lambarka: giq42232
Haddii aad raadineyso lambar sir ah si aad ugu hesho € 3 bilaash shidaalka Repsol ee leh Repsol Wallet, waa kan tayda: 4vb52234
Waxaan kaaga tagayaa lambarka qiimo dhimista ee 3 euro: yxs22232
Fiid wanaagsan, sidoo kale waxaan kuu daayay koodhkeyga si aan dhammaanteen uga wada faa'iideysanno dalacsiinta (€ 3). q5s32236. Mahadsanid.
Fiid wanaagsan, sidoo kale waxaan kuu daayay koodhkeyga si aan dhammaanteen uga wada faa'iideysanno dalacsiinta (€ 3). q5s32236. Mahadsanid.ff
Haye, waxaan uga tagayaa tayda silsiladda: 36w32234 Graxxx
anigaa iska leh
Wixii ay u qalanto qof waxaan halkan kaga tagayaa nambarkeyga.
Koodh cusub oo la cusbooneysiiyay oo aan kaaga tagayo inaad si toos ah € 3 horay u sii dejiso -> 3pte8aa3
Ku jawaab iA
Waxaad ku heli kartaa qiimo dhimis € 3 gudaha Waylet Repsol adoo galaya lambarka: 3ptqdws6
Koodh cusub oo lagu kasbado € 3 la Repsol waylet.
Jorge Fer dijo
Halkan waxaad ku haysaa dhimis € 3 oo leh lambarkan:
Jawaab Jorge Fer
Waxaan kuu daayay koodhkeyga
Kani waa koodhkayga haddii ay dhacdo in qaar idinka mid ahi soo degsadaan 1OPPFS92
Ku jawaab armando
Kani waa koodhkayga haddii ay dhacdo in qaar idinka mid ahi soo degsadaan 1OPPFS92. Soo dejiso oo ka faa'iideyso sicir-dhimista € 3.
CUSUB, TIJAABO iyo cusbooneysiin koodh ah oo aan kaaga tagayo inaad si toos ah € 3 horay uugu soo dhejiso -> 3ptgqki8
Ku jawaab xab
Anabel Garcia dijo
Koodh u dhigma € 3 shidaalka:
Jawaab Anabel García
Haddii aad rabto discount 3 qiimo dhimis isticmaal koodhku waa: Xdy62232
Haddii aad rabto coup 5 qiimo dhimis ah, inta u dhexeysa Noofambar 24 iyo 27, ku rakib arjiga Repsol Waylet iyo qaybta "dalabyadayda" waxaa ku jira lambarka soo socda:
iyo haddii aad rabto kuuboon dheeri ah oo ah € 3, sidoo kale gali nambarka soo socda
Haddii aad rabto kuuboon qiimo jaban € 5, inta u dhexeysa Noofambar 24 iyo 27, ku rakib arjiga Repsol Waylet iyo qaybta "dalabyadayda" waxaa ku jira lambarka soo socda:
Maanta, Isniinta, Nofeembar 27, fursadda ugu dambeysa ee lagu heli karo € 8:
Discount 5 qiimo dhimis ah, inta udhaxeysa Noofambar 24 iyo 27, ku rakib arjiga Repsol Waylet qaybta "dalabyadayda" waxaa kujira lambarka soo socda:
3 dheeraad ah markaad sidoo kale geleyso lambarka soo socda
Isticmaal lambarkan oo waxaad ka heshaa discount 3 sicir shidaalka. CODE: 1oqaxug0 WAA SAHAL !!! Waxaad fureysaa arjiga, waxaad taabaneysaa geeska bidix ee kore. Adigu waxaad tagtaa My Offers ka dibna waxaad gashaa lambarka 1oqaxug0 Waxaad siisaa Redeem oo waxaad helaysaa kuuboon of 3 !!!! !!!! Bilow lacag urursi !!!!
Ku soo jawaab Framestock
Waxaan kaaga tegayaa lambarka saaxiibkaa: yxs22232
Ku jawaab Cristy
Koodh cusub oo la cusbooneysiiyay oo TESTED ah oo aan kaaga tagayo inaad si toos ah € 3 horay u sii dejiso -> 3pte8aa3
App waa weyn yahay oo koodhka waxaa la geliyaa iyada oo aan wax dhibaato ah ka dib rakibidda, ama ka dib.
Ku jawaab iA2
lambarka saaxiib: 8 × 562232
Haye! Waxaan kuu daynayaa lambar qiimo dhimis ah:
Kani waa koodhkeyga haddiiba midkiinuu soo dejisto kypf2238. Adiga ayaa kuhelaya discount 3 qiimo dhimis ah Waylet Repsol.
Lambarka saaxiibkay ee ah in la helo sicir-dhimista € 3 ee shidaalka oo leh 'Repsol waylet' waa: ch4h2236
Waad salaaman tahay, halkan waxaa ku yaal lambar sir ah:
Tan waxaad ku helaysaa discount 3 qiimo dhimis ah.
Waxa kale oo aad heli kartaa rasiidh dheeri ah, illaa 12% oo ay bixiyaan Zalando iyo Atrápalo.
Sawirka meeleynta Antonio Blanco Castro dijo
Waxaa jira suurtagalnimada in dib loo furo wax ka badan hal lambar saaxiib. Oo sidee loo sameeyaa? Hagaag, nidaamku ma ogola.
Waad ku mahadsantahay jawaabaha.
Jawaab ku sii Antonio Blanco Castro
Google ayaa joojin doonta urinta emaylladaada si ay kuu tusto xayeysiin
Nike's SNKRS wuxuu ku keenayaa Xaqiiqada Kordhinta App-ka iOS